कुनै समय पार लाउन साथ चाहिन्छ! - Blogs of Sagar Prasai
कुनै समय पार लाउन साथ चाहिन्छ!
१० वर्ष जति अगाडी मेरो जिवनमा एउटा दुखद घटना घट्यो। म त्यो घटनाले यति विक्षिप्त भएँ की मेरो लागी संसारमा अब कुनै कुरा बाँकी रहेन। मलाई हरदिन मर्न मात्रै मन लाग्थ्यो। तर मेरो विवशता यस्तो थियो कि म कतै एक्लै गएर धेरैवटा निद्रा लाग्ने औषधी पनि किन्न सक्दिन थिए। बल्ल बल्ल चार पाँच ठाउँबाट १-२ वटा ट्याबलेट किनेर ५-६ वटा बनाएर खान र खान्थेँ तर त्यतिले के मरिन्थ्यो। बरू दिनभर झुम्म भएर कोठामा बसिरहन्थे।
मेरो परिवारका मान्छे मेरो हालत देखेर एकदम दुखी हुन्थे। सम्झाउँथे, गाली गर्थे, कोहि कोहि- छ्या कस्तो काँयर भन्थे। मलाई ईख लाग्छ भनेर होला; कोहि कोहि चाँहि –"मर्न भन्दा बाँच्न साहस चाहिन्छ बाबु-बाँचेर देखाईदेउ" भन्थे। तर मेरो लागी यस्ता कुरा ईख हैन झन् विख सावित भए। मलाई मेरो कुरा बुझ्ने कोहि छैन जस्तो लाग्न थाल्यो र म हरदिन झन् दुखको भूमरीमा भित्र भित्र सम्म पुग्न थालेँ।
अति भएपछि एकजना आफन्तको करमा म मनोपरामर्शदाताको मा पुगेँ। त्यो बेला, मैले मेरो काउन्सिलर सँग पहिलो दिन एक घण्टा जति बिताउँदा- पर थोरै मधुरो भएपनि उज्यालो देखे जस्तो महशुस गरेँ। त्यसपछि मैले वहाँसँग धेरै समय विताएँ। वहाँले मलाई सल्लाह दिनुहुन्न्थ्यो, बस् मेरो कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। र मलाई त्यतिले गर्दा मन हलुँगो भएजस्तो लाग्थ्यो। बल्ल बल्ल एक वर्षजति मा म बिस्तारै ठिक भएँ।
मेरो आफ्नै यो कथाबाट मैले बुझेको कुरा- धेरैजनाको जिन्दगीमा एउटा यस्तो मोड आउँछ कि उनीहरू आफु बाँच्नुको कुनै अर्थ भेट्दैनन्। यस्तो समयलाई कसैले आफै सामना गर्छन् र पार लगाउँछन। कसैले सक्दैनन र आफु नै पार लाग्छन्। यसमा को हिम्मतिला र काँयर वा को बलियो र कमजोर भन्ने कुरा हुदैन।
कुनै पनि समय यस्तो हुदैन, जुन बितेर नजाओस्। तर कोहि बेला कसैको लागी परिस्थिति यस्तो बनिदिन्छ की, त्यो समय बिताउन अरुको (हाम्रो) साथ चाहिन्छ। सुझाव हैन, सल्लाह हैन- साँच्चिकै साथ!
र साथ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने- कसैको आँशु रोक्न सकिदैन भने, उसलाई रुन सजिलो होस् भनेर आफ्नो काँध थाप्दिउँ। साथ भनेको त्यहि हो।